अप्रील 17, 2018 अप्रील 17, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डिजिटल
प्रिण्ट गरिएका कागजातमा प्रमाणीकरणका लागि हस्ताक्षरको प्रयोग भए जस्तै समान प्रयोजनका लागि डिजिटल तथा विद्युतीय सामग्रीमा हुने एक किसिमको हस्ताक्षर नै डिजिटल हस्ताक्षर हो । त्यसबाट वास्तविक निवेदकको पहिचान अथवा प्रामाणिकता हुन्छ । तर यस्तो हस्ताक्षरलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न भने सकिन्न । सूचनामूलक सामग्रीमा डिजिटल हस्ताक्षर गोप्यरूपमा समावेश भएको हुन्छ ।
डिजिटल सिग्नेचर विद्युतीय माध्यमबाट काम कारबाही गर्नको लागि कार्डमा दिइने एउटा पिन कोड हो । जुन कोडले सूचनाहरु सुरक्षित माध्यमबाट आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगबाट सूचनाहरु कम्युटरमा मात्रै सुरक्षित किसिमले भरपर्दो गरी आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोगबाट अनलाइनमा हुने कारोबार भरपर्दो र सुरक्षित हुन्छ। डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्नको लागिजोडी साँचो (एउटा सार्वजनिक सांचो र अर्को निजी साँचो) को आवश्यकता पर्दछ ।
← विधि विज्ञानमा क्रिमिनालिष्टिक्स इकाईमा के के को परीक्षण गरिन्छ ?
सार्वजनिक साँचो (Public Key Infrastructure-PKI) भनेको के हो ? →
बलिरहेको ट्युबलाइटको स्टार्टर झिकिदिँदा पनि किन बलिरहन्छ ?